#उमेदवार Archives - Left Review Online
आज : २०७७ असार ३० गते मंगलवार
नेकपाद्वारा राष्ट्रिय सभाका लागि पार्टीका उम्मेदवारहरू तय
लेफ्ट रिभ्यु संवाददाता २०७६ पुस १८ गते शुक्रवार
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवारहरूको नाम टुंगो लगाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता क. नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालसहितका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । राष्टिय सभानिर्वाचनका लागि नेकपाका...बाँकी
#उमेदवार#निर्वाचन#नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)#राष्ट्रिय सभा
आसन्न निर्वाचन र माओवादी केन्द्रका उमेद्वारहरु
क. नहेन्द्र खड्का २०७४ असोज ९ गते सोमवार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेपालका शोषित, उत्पीडित, देशभक्त र क्रान्तिकारी जनताको नेतृत्वदायी राजनीतिक पार्टी हो । यो नेपालको एक मात्र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी पनि हो । यो नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको अग्रदस्ता हो र नेपालको भावी सामाजिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्ने एक मात्र शक्ति हो । यो...बाँकी
#Candidate Selection#उमेदवार#उमेद्वार छनाैट#नहेन्द्र खड्का#निर्वाचन#नेकपा (माओवादी केन्द्र)